Tababaraha Chelsea Thomas Tuchel: ‘Saxaafaddu way ku qaldan tahay inay diiradda saaraan Romelu Lukaku’ | dalkaan.com-Wararka ugu danbeeyay ee soomaaliya
Home Ciyaaraha Tababaraha Chelsea Thomas Tuchel: ‘Saxaafaddu way ku qaldan tahay inay diiradda saaraan...
Tababaraha Chelsea Thomas Tuchel: ‘Saxaafaddu way ku qaldan tahay inay diiradda saaraan Romelu Lukaku’
Tababare Thomas Tuchel ayaa ka jawaabay dhaleeceynta Romelu Lukaku , isagoo sheegay in kooxdiisa Chelsea aysan u dhisneyn inay “hal ciyaaryahan u adeegto”.
Tuchel ayaa ka niyad jabay qaab ciyaareedkii weerarka ahaa ee ay Chelsea ku soo bandhigtay kulanki Manchester City, wuxuuna daaha ka qaaday intii uu socday hadaladii ciyaarta ka dib in uu dareemay in Lukaku uu soo bandhigi karayay qaab ciyaareed heerkiisu sareeyo.
Isbuucyo ka dib markii Belgian-ka uu soo jeedinayo inuusan ku faraxsanayn Stamford Bridge, dareenka ayaa weli ah 28 jirkaan, kaasoo dhaliyay kaliya sideed gool 23 kulan oo uu saftay xilli ciyaareedkan.
Isagoo wariyaasha kula hadlayay shir jaraa’id ayuu Tuchel yiri: “Waxaan sameynaa wax walba si aan u caawino Romelu, waxaan u maleynayaa in tani gabi ahaanba ay tahay su’aalaha qaldan sababtoo ah waxay diirada saaraysaa hal ciyaaryahan, waa ciyaaryahan muhiim ah, waxaana dooneynaa inuu noqdo ciyaaryahan muhiim ah. laakiin aniga, tani waa hab qaldan.
“Tani waa waxa aan si joogto ah u sameyno ciyaaryahan kasta, tani waa ciyaar kooxeed, ma ahan ilaa 10 ciyaaryahan oo u adeegaya hal ciyaaryahan, kani ma ahan Chelsea, mana ahan kubada cagta, ciyaaryahan kasta ayaa u adeegaya kooxda, taasi waa kan ugu sarreeya. mabda’a, mana isbedeli doono.”
Chelsea ayaa Kulanka xiga wajaheysa Brighton & Hove Albion garoonka Amex Stadium fiidnimada talaadada.
Daacishta Soomaaliya oo war kasoo saartay isbedalka hoggaanka kooxdaas?
Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Linkedin Email Print Viber Boosaaso (Caasimada Online) – Kooxda Daacish, gaar ahaan faraceeda Soomaaliya ayaa ka hadashay isbedalka ballaaran ee ku yimid hoggaanka guud ee kooxdaasi. Bayaan kasoo baxay...
Qoor Qoor oo kala qabanaya Farmaajo iyo Rooble. Yaa ka dalbaday...
Mowqifka madaxda maamul goboleedyada ee dalabyadii Midowga Musharaxiinta
Yaa sabab u ahaa in shalay uusan Mursal Baarlamaanka keenin dooddii...
Callum Hudson-Odoi oo Rikoor Cusub la wareegay isagoo ka jabiyay Xidiga...
Lafta-gareen oo shaaciyey musharaxa uu taageerayo ee xilka guddoomiyaha BF
Sawirro: Yaa loo doortay gudoomiyaha guddiga doorashada guddoonka BF?
Manchester United oo 20 milyan kula soo Wareegeysa daafac dhexe oo...